पटक पटक म्याद थपिएको ठिमुरामा निर्माणधीन पक्की पुल भत्कियो। – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
पटक पटक म्याद थपिएको ठिमुरामा निर्माणधीन पक्की पुल भत्कियो।
| प्रकासित मिति : २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:२४
२४ चैत, चितवन/चितवनको ठिमुरा र तनहुँको देवघाट जोड्ने त्रिशुली नदी माथि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुल भत्किएको छ । २२० मिटर लामो र ८.५ मिटर चौडाइको पुलको ८० मिटर लम्बाई भाग भत्किएको हो । चितवन भरतपुर महानगरपालिका को वडा नम्बर एकको ठीमुरा र देवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच घिनटार जोड्ने सो पुलको पिलरको काम सकिएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जानकारी दिएको थियो।
इलाइट, एड्भेन्चर र इन्द्रेणी जेभी गरी तीन कम्पनी मिलेर बनाउँदै गरेको पुल ढलान गरेको २१ दिनको दिनमा आज भत्किएको कार्यालयका प्रमुख कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार प्रिस्टेसिङका क्रममा रहेको ४० मिटरको पुल भत्किदा अर्को बनिसकेको ४० मिटर भाग समेत भत्किएको हो ।
साधारणतया २८ दिनमा पुलको ढलानका सपोर्ट निकाल्ने गरिने भएपनि ट्रसको काम गर्ने क्रममा २१ दिनमै ढलान मा धक्का पुगेकाले पुल भत्किएको हुन् सक्ने अनुमान गरिएको छ।
पुलको एक खण्डमा ट्रसको काम भैरहेको थियो । पुलको चारवटा स्पानमध्ये मुख्य भागमा ८० मिटर लामो स्टिलको ट्रस्ट संरचना बन्दै थियो । सो ट्रसलाई लिफ्ट गर्दा ढलान गरिएको पुलमा धक्का दिँदा भत्किएको हुनसक्ने प्रमुख अधिकारीको आँकलन रहेको छ ।
ठेकेदारले समयमा नै काम नसकेको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक विरोध गर्दै आएको सो पुलको सुरुमा १६ करोडको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पछि पुलको डिजाइन ‘रिभ्यू’ गरेर २१ करोड ६८ लाख पु¥याइएको थियो । डिजाइन संशोधनको नाममा १८ महिना, भूकम्प र नाकाबन्दीको नाममा करिब एक वर्ष काम रोकिएको थियो । दुई दुई पटकसम्म म्याद थप गरिएको भएपनि पुल समायमा निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी असफल भएको छ। पुलको सम्झौता अवधि गएको पुस १३ गते सकिएको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई देखाउँदै फेरि म्याद थप गरिएपनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै पुल भत्किएपछि यो पुल कहिले सम्पन्न हुन्छ,त्यो अनिश्चित बनेको छ। यता सडक डिभिजन भरतपुरका प्रमुख अधिकारीले भने तत्काल फोहर हटाई निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने बताए।
ठेकेदारले समयमा नै पुलको काम नगरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सडक डिभिजन कार्यालयसँग जवाफ माग गरेको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकेको, पटक–पटक डिजाइन फेरेको र काम ढिलो हुँदा लागत रकम बढेको बारे महालेखाले चासो व्यक्त गरेको थियो । ६ वर्षअघि २०७१ कात्तिक २० गते ठेक्का सम्झौता भई शिलान्यास गरिएको पुल २०७४ कात्तिक २० गते भित्र बनाइ सक्नुपर्ने थियो तर बिभिन्न कारण र बहाना बनाउँदै ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माणमा ढिलाई गरेको स्थानियको भनाई छ। स्मरण रहोस गत वर्षको बाढीले समेत पुल निर्माणको लागि राखिएका केही सामग्री बगाएको थियो।।
विद्यालयलाई पोशाक सहितकाे सहयोग प्रदान।
दाऊन्नेमा दुर्घटना हुँदा ३१ जन घाईते। २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:२४
चितवनमा दुर्घटना बढ्दै: आज मात्र दुई दुर्घटनामा ७ को मृत्यु दर्जनौं घाईते। २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:२४
चितवनको भरतपुरमा म्याजिक आफै अनियन्त्रित भई खाल्डोमा खस्दा दुईको मृत्यु, ७ जना घाईते २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:२४
मूल्यवृद्धि आकासिदै ! २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:२४
अब दलालीमार्फत घरजग्गा कारोबारमा प्रतिबन्ध ! २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:२४
दिनहुँ हराउँछन् १० जना बालबालिका २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:२४
पटक पटक म्याद थपिएको ठिमुरामा निर्माणधीन पक्की पुल भत्कियो। २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:२४
विद्यालयलाई पोशाक सहितकाे सहयोग प्रदान। २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:२४
धोबीखोलामा हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै फिर्ता ल्याइने २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:२४
प्रेस चाैतारी र जनपत्रकार संगठन चितवन बीच पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति। २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:२४
यस बर्षको फागुपर्व तथा नयाँ बर्ष घरमानै बसेर मनाउन प्रशासनको आग्रह २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:२४
नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको निधन २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:२४